Isinqamula izikeyo eyaKwaDakw’udunuse - Bayede News
Okwamanje akekho osaqhamuka nosizo
Usedwebe umugqa owayenguMengameli weze uMnu uZuma uthi usengamane aye ezikhindini kunokuba kunyathelwe ilungelo lakhe elikuMthethosisekelo wezwe. Lokhu kulandela isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo ngoLwesine olwedlule lapho iyalele uZuma ukuba avele ngaphambi kweKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kombuso.
Encwadini ayikhiphe ngoMsombuluko uZuma uthi ufuna ukusheshe akucacise ukuthi le Khomishini eholwa uMehluleli uZondo ngeke azihlanganise nayo kubhekwe phambili.
Uqhuba athi: “Kulezi zimo, akukho okunye engingakwenza ngaphandle kokuba ngilwe nokungabikho kobulungiswa njengoba ngenza kuhulumeni wobandlululo. Ngizimisele ukuphinde ngiye ejele ukuvikela amalungelo akuMthethosisekelo, ngidonse noma yisiphi isigwebo lo Hulumeni okhethwe ngokwedemokhrasi obona sifanele indlela ekhethekile neyemithetho eyahlukile ukufeza inhloso ngoZuma.”
Uthi kuyacaca ukuthi imithetho yaleli zwe isinenhlese yepolitiki ngisho inkantolo enkulu ezweni. Ubalule izinsolo zakamuva ezivele kuKhomishini kaZondo ezibhekiswe kwezobulungiswa wathi zizitshiwe futhi zanyathelwa uSihlalo weKhomishini.
Uthi lokhu kukubeka kucace ukuthi kuphunywa naye iqhubu ukuze aphathwe ngendlela eyahlukile ngabezobulungiswa nabezomthetho jikelele.
“Ulaka olubhekiswe kimi alunamingcele njengoba nezingane zami nalabo okwaziwa ukuthi basondelene nami balandeliwe futhi bahlukunyezwa kangangokuba kuze kwavalwa ama-akhawunti abo asemabhange ngaphandle kwesizathu esithile ngaphandle kokuthi kwaziwa ukuthi basondelene nami,” kusho uZuma.
Nokho uyakugcizelela ukuthi akaze asho ukuthi akafuni ukwethula ubufakazi kuKhomishini kodwa akushoyo ukuthi akakwazi ukuvela phambi kukaZondo ngenxa yokuchema okubonakalayo kanye nomlando wobudlelwano babo.
Uthe udaba lukaZondo nokulalela ubufakazi bakhe useludlulisile ukuba lubuyekezwe ngoba ekholwa ukuthi ukuqhubeka kwakhe (uZondo) ngeke kumnike yena isiqinisekiso sokuthi uzothola ukulalelwa okulungile nokunobulungiswa.
UMsholozi usole uHulumeni ngokuziba lokho nokunye okuphambene nobulungiswa ngoba kuhloswe yena wathi noma yini enegama lakhe ayivikelwa futhi ayilinikwa ilungelo lomthetho kuleli zwe ukuze kuqhubeke izifiso zokuba aphathwe ngendlela eyahlukile kusetshenziswa imithetho eyahlukile.
Uthe nendlela uMehluleli uZondo achitha ngayo isicelo sakhe sokuba angahlali uma esethula ubufakazi kuKhomishini ayibanga nalo iqiniso ngendlela achaza ngayo ubudlelwano babo.
“Bengethembele ebuqothweni bakhe, obubukeka sebulimele, ukuba adalulele umphakathi ngokungenelela kwami ngokwezimali ezindabeni ezithinta isondlo sengane yena aseveze iminingwano yayo. Bengethembele ebuqothweni bakhe njengomuntu nanjengesisebenzi sezobulungiswa ukuba akhumbule ukuthi ezikhathini eziningi ubenxusa abantu abafana noMnu uManzi ukuthi bamkhulumele nami mayelana nokuqokelwa kwakhe ezikhundleni eziphezulu kwezobulungiswa nezifiso zakhe zokuba ngimbonelele njengoMengameli ukuba akhuphukele ezinkantolo ezinkulu ngesikhathi ngisenguMengameli.
Bengethembele ebuqothweni bakhe njengomuntu nanjengesisebenzi sezobulungiswa ukuba akhumbule ukuthi sake sahlangana naye endaweni yami yokuhlala eForest Town ukudingida ubudlelwano bethu nobungozi emphakathini ngenxa yokusondelana kwethu uma kubhekwa izikhundla esasiziphethe ngaleso sikhathi. Bengethembele ebuqothweni bakhe … ukuthi akhumbule ukuthi yena nenkosikazi yami esesingasasondelene nayo uThobeka baxhumene kakhulu nokuthi yimi engibahlanganisayo ezingxenyeni ezibalulekile zempilo yabo,” kulandisa uMsholozi.
Uthi nasodabeni lokuhlalela ubufakazi bakhe kuKhomishini, ubethembele ebuqothweni bukaZondo njengesisebenzi sezobulungiswa ukuthi angabi ngufakazi nomehluleli esicelweni angene wagamanxa kuso.
UZuma uthi uZondo uzakhele impikiswano ngamaqiniso esicelweni esithinta yena futhi waqhubeka wehlulela udaba lapho uhlangothi lwakhe beluphikiswa uyena uNxamalala.
Ukuvulwa kweSishayamthetho kungahle kwenzeke ngobuxhakaxhaka
Ufanise isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo nokuziphatha kweKhomishini ngokuthi nayo le Nkantolo isiyakhe izimo ezikhethekile nezahlukile eziqondene ngqo naye ngokuthi ichithe amalungelo akhe agunyazwe uMthethosisekelo okumshiya engavikelekile kuKhomishini.
Uthi lokhu kumkhumbuza ukuthi uhulumeni wobandlululo wawuphasisa kanjani umthetho iGeneral Laws Amendment Act 37 we-1963 owakha isigaba esasivumela ukuthi umuntu aboshwe isikhathi esingenamkhawulo okwakuhloswe ukuba sisetshenziswe kumholi wePAC, uRobert Sobukwe.
“Kunzima ukukuziba ukuhlobana kwalokhu uma ubheka ukuthi uSobukwe wayejeziselwa ukuma embonweni wenkululeko. Nami ngakolunye uhlangothi ngifela izinkulomoze, ukucokofulwa nezinsolo ezingamanga ngenxa yengimi kukho ngokuguqulwa kwaleli zwe nomnotho walo.
IKomishini ephenya izinsolo zokugwamandwa kombuso kwakufanele iqanjwe kahle kuthiwe eyokuphenya izinsolo zokugwamandwa kombuso eqondiswe kuZuma njengoba kucaca ukuthi yakhelwa ukuphenya mina ngqo,” usho kanje.
UMsholozi uthi isinqumo sakamuva seNkantolo YoMthethosisekelo sishiye umbuzo ukuthi kungani uMehluleli Omkhulu uMogoeng aqala amtshela ukuthi iKhomishini izoholwa uMehluleli uDesai kodwa wayube washintsha wathi sekuzoba uZondo.
Akasalanga ngaphandle olakeni lukamfo wakwaDakw’ udunuse uSolwazi uThuli Madonsela owayenguMvikeli Womphakathi nokunguye owaphakamisa ukuba kusungulwe le Khomishini.
UZuma ukhala ngesincomo sikaSolwazi uMadonsela sokuthi ozohola le Khomishini aqokwe uMehluleli Omkhulu esikhundleni sikaMengameli.
nguSabelo Mbatha Feb 1, 2021